ကြေးနီမိုင်း ကို ဆက်လုပ် ဖို့ပြောတဲ့ ဒေါ်စု ပြည်သူ တွေ က မျက်မုန်းကျိုး | The FNG
March 13, 2013 · by 21 South News	· in (unnamed), ပြည်ပသတင်း, News, OP / ED.	·
အေးအေးစိုးဝင်း ၊ ၊ကော်မရှင် အစီရင်ခံစာထွက် ပြီးသည်.နောက် တနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေက
သူမကို အလွန်ဒေါသထွက်စိတ်ဆိုးနေတဲ.အရှိန် ထိုးတက်လာခဲ.တာ မြန်မာ.
ကွက်တဲ. တစ် ဘီလီယံတန်ဘိုး ရှိ မုံရွာ ကြေးနီတောင် စီမံကိန်းကို ဆက်ခွင်.ပြုရမယ်လို.
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း မှာ ဆန္ဒပြသူတွေကို လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ.၀င်တွေက
မီးသတ်ကားရေပန်းတွေ မီးလောင်ဗုံးတွေ သုံးပြီး အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခဲ.အပြီးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစု
ဆန္ဒပြ သူတွေ သိမ်းထားတဲ. သပိတ်စခန်းကို အကြမ်းဖက်လုံခြုံရေးတပ်သားတွေက ပြီးခဲ.တဲ.
နိုဝင်ဘာ မနက်မိုးမလင်းခင်မှာ ရေနှင်. မီးလောင် ဓါတ်ပြုစေသော ဖော.စဖရပ်သုံး ပြီး ဖြိုခွဲခဲ.တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဗုံးမျိုးကို သုံးစွဲခဲ.သူရဲတပ်ဖွဲ.အား အရေးယူခြင်း အလျဉ်းမရှိတဲ.အတွက် လူတွေက ပို
အစိုးရဖက်ကတော. အစီရင်ခံစာမထွက်ခင်အထိ သူတို.သုံးခဲ.တာ ဖေါ.စဖရပ်ပါဝင်တဲ.
မီးလောင်ဗုံးမဟုတ်ပါဘူးလို. ဗြောင် ငြင်းဆိုခဲ.တာပါ။ ခုတော.၊ အစီရင်ခံစာက သူတို. အစ
ငန်းကို ဆက်လက်ခွင်.ပြုလုပ်ဆောင်ရမယ်လို. အကြုံ့ပြုခဲ.တာမို. ဒီအချက်က
ရပ်လိုက်ရင် တရုပ်နဲ.တင်းမာမှု ဖြစ်မှာ။ မရပ်သင်.၊ မဖြစ်သင်.လို.ဆိုတဲ. ဆင်ခြေပေးခဲ.တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာ က မြေယာ ဆုံးရှုံးတဲ. တောင်သူလယ်သမားတွေကို နစ်နာကြေးရော်ကြေးပေး သင်
ကရော ဥပဒေမချိုးဖေါက်လို.လား။ အစိုးရက နှစ်ဖက်စလုံးကို သေသေချာချာ စုံစမ်းစစ်ဆေးပြိး
— ဦးဇင်း မနက်ဖန်ကျရင် ဒေသခံ တွေနဲ. ဘာဆက်လုပ်သင်.သလဲဆိုတာ သွားတွေ.ဆွေးနွေးကြည်.ပါဦးမယ်။
ဦးဇင်းတို.ဒေသခံတွေကတော. ဆက် ဆန္ဒပြရမှာပါပဲ–လို. မိန်.ဆိုခဲ.ပါတယ်။
သမ္မတသိန်းစိန်လက်ထက် ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်နေပါတယ်လို.ပြောနေလျက်ကပဲ လူတွေဆန္ဒပြနိုင်ခွင်.ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ငြင်းပယ်ပြီး ဒီလို ဆန္ဒပြခွင်.တွေကို နိုင်ငံမှာ အကန်.အသတ်ကြီးစွာ
ထိန်းချုပ်ထားဆဲဆိုတာကို လက်ပံတောင်း တောင် အကြမ်းဖက်မှုက သက်သေခံခဲ.ပါတယ်။
တွင်းတွေစီသွားပြီး စကားပြောဆိုရဦးမှာပါ။ အဓိကကတော.၊ ပြီးခဲ.တဲ. မနှစ်နွေဦး မြန်မာလွှတ်တော်မှာ
အရွေးခံရပြီးကတည်းက ပင်မနိုင်ငံရေး စည်းထဲက သူမလုပ်ခဲ.သမျှ အပေးအယူနည်းနာတွေကို
(ရွာသူရွာသားတွေအား) အထူးပြု ပြောကြာ:မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
← ပုပ် ရဟန်းမင်းကြီး ရွေးချယ်ပွဲ စပြီ
9 responses to “ကြေးနီမိုင်း ကို ဆက်လုပ် ဖို့ပြောတဲ့ ဒေါ်စု ပြည်သူ တွေ က မျက်မုန်းကျိုး”
newgeneration March 16, 2013 at 6:29 pm · ·
kyaw kyaw March 14, 2013 at 12:19 am · ·
minsoe March 13, 2013 at 8:28 pm · ·
poehut March 13, 2013 at 6:59 pm · ·
poehut March 13, 2013 at 7:02 pm · ·
Zaw March 15, 2013 at 11:46 am · ·
မတင်သင့်ပါဘူး ။ ဆန္ဒပြတိုင်း အလျှော့ပေးရတယ်ဆိုတဲ့ အသိဟာနည်းလမ်းမှန်မဟုတ်ပါဘူး ။
ညှိနိူင်းဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် အဖြေရှာပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
Su Su Kyi March 13, 2013 at 2:14 pm · ·
Nay Lynn March 13, 2013 at 10:51 am · ·
Shwe Pu Lay March 13, 2013 at 2:30 pm · ·